Hetsika 24 Ora Manohitra Ny Fanampenam-Bava Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2017 4:15 GMT
(Marihina fa tamin'ny 6 Novambra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Manomana hetsika antserasera manohitra ny sivana amin'ny Aterineto ny namanay ao amin'ny Reporters without Borders (matetika antsoina hoe “RSF” – Reporters sans Frontières ), izay hanomboka rahampitso amin'ny 11 ora maraina (oran'i Paris) ary mitohy hatramin'ny 11 ora maraina ny Alarobia 8 Novambra.
Ny tanjon'ity fihetsiketsehana ity dia ny hisarihana ny saina amin'ny fanampenam-bava amin'ny aterineto any amin'ny firenena miisa 13 lazain'ny RSF ho “lavaka maintin'ny aterineto” amin'ny alàlan'ny fanaovana kitika eo amin'ny sarintanin'ireo firenena ireo, manoratra ny hetsi-panoherany ny sivana amin'ny aterineto sy ho famotsorana ireo mpanohitra amin'ny aterineto maherin'ny 60 izay nosamborina amin'izao fotoana izao noho ny lahatsoratra tao amin'ny bilaoginy.
Mikendry manokana ny Yahoo! ny hetsi-panoherana, manasa ireo mpisera mba handrakitra hafatra ho an'ny mpanorina ny orinasa. Lasibatra manokana ny Yahoo! ho an'ny RSF satria niara-niasa tamin'ny manampahefana Shinoa ny orinasa tamin'ny fanadihadiana ireo mpanao gazety, ary nanome ny vaovao izay nanampy tamin'ny fisamborana an'i Shi Tao, mpanao gazety iray migadra folo taona noho ny “famoahana tsiambaratelom-panjakana tany ivelany”.
Manasa ireo mpitsidika ny tranonkala ihany koa ny RSF mba hanomboka ireo bilaogy izay ampiantranoin'ny fikambanana – haneho hevitra avy amin'ireo blaogy ireo ny RSF ao zoro iray mivoaka isan-kerinandro mitondra ny lohateny hoe “The Blog View of the World” (Ny Fomba Fijerin'ny Bilaogy An'izao Tontolo Izao). Farany, hamoaka ny tranonkala amin'ny dikanteny Arabo, izay hameno ny dikanteny Frantsay, Espainola ary Anglisy izay efa misy ankehitriny ny RSF.
Feno fankasitrahana izahay noho ny asa mafy nataon'ny RSF mba hampiroboroboana ny fahalalahana sy ny fisokafana antserasera. Miangavy anao mba hitsidika ny tranokalany androany sy haneho ny fanohananao ny ezak'izy ireo.